ज्योतिषीको अनुमानः कसले जित्ला विश्वकप? | Nagarik News - Nepal Republic Media
ज्योतिषीको अनुमानः कसले जित्ला विश्वकप?
ज्योतिष वेद सापकोटाले विश्वकपको भविश्यवाणिका लागि गरेको ज्योतिषिय गणनाको स्केच।
काठमाडौं– रुसमा भइरहेको फिफा विश्वकप २०१८ को आज अन्तिम दिन। फ्रान्स र क्रोएसिया उपाधि भिडन्तमा छन्। स्वभाविक रुपमा फुटबलका रुचि राख्ने सबैले अनुमान लगाइरहेका छन्। फुटबलले कुन वर्गलाई छोएको छैन र!
ज्योतिषीले पनि भाव र राशि विश्लेषण गरेर यसपटकको विश्वकप उपाधि फ्रान्सको पक्षमा जाने अनुमान गरेका छन्। ज्योतिष वेद सापकोटा ‘क्रषि’ले भाव र राशिको पक्ष र विपक्ष केलाउँदै ज्योतिषिय गणना अनुसार फ्रान्सले विश्वकप उपाधी जित्ने बताएका छन्। हेर्नुहोस् ज्योतिषिय गणानाको पूर्ण विवरण।
प्रकाशित: ३१ असार २०७५ १५:४८ आइतबार
ज्योतिषीको अनुमानः कसले जित्ला विश्वकप